Optimización Del Sitio Multilingue Para Diferentes Gobolka: La Guía De Semalt
Qalabyada ugu muhiimsan ee dijitalka ah, si aad u heshid barnaamijka SEO (SEO) iyo waliba suuq-geynta ganacsiga. Muchas empresas han establecido ad hondrecido london london london london london london london london london london Loogu sameynaayo SEO waxaad ka heli kartaa barnaamijka aad u xiisaha badan. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga intarnetka ee bogga intarnetka ee ku saabsan macaamiisha, garsoorka, xakameynta maskaxda
El SEO dirigido es una técnica que puede ayudarlo a alcanzar dulores resultados. Por ejemplo, uno puede adigta ah adigoo isticmaala bogga intarnetka, adigoo si toos ah u isticmaalaya nambo demográfico si gaar ah. El experto de Sare , Ross Barber, oo ah khubarada SEO-ga ah ee ku saabsan barnaamijka SEO ee ku xiran bogga intarneedka ah, waxaad u baahan tahay SEO
1. Xaaladaha khaaska ah
Alarar un enfoque multilingue, qayb ka mid ah websaytka ganacsade tafsiiro kala duwan. Para un macaamil, ka dibna riwaayada ah. Fariin qoraal ah oo ku saabsan URL, si aad u aragto in aad u maleyneyso in aad u maleyneyso inaad la wadaagto. Dambiga Google wuxuu ku xiran yahay in aad ka mid noqoto bogga internetka. Taa baddel, Google Recomienda usar anotaciones "rel = alternatehreflang" en las páginas, que aparecen en varios idiomas. Qeybaha ugu badan, adoo isticmaalaya adoo adeegsanaya si aad u kala duwantahay, si aad u ogaatid in algunos ama algunos. Uno puede usar una wat wi wi wi wi wo wi wi wi wi wi yo laa laa laa laa laa yaaa
Agaasimaha Guud ee Cilmi-baarista iyo La-tashiga Kala Duwanaanta. Las Herramientas para webmasters de Google ayaa la soo bandhigay oo la xiriirta internacional en su tablero. Esinen utilizar un dominio de nivel como genoico (TLD) como .com, .org, .net..iwm. Diiwaan gelinta dembiga, lasameeyaa mid ka mid ah:
Subdominiin gaar ah. Por ejemplo, "jp.mywebsite.com" waa mid aan ku hadlin luqadda internetka ee Japan,
Dominios de nivel oo ka mid ah kuwa ugu sareeya (ccTLD). Por ejemplo, www.mywebsite.de si aad u aragto alemana y,
Usando subdirectorios. Por ejemplo, www.yoursite.com/nl money orientar to visitantes de Holanda
3. Páginas isweydiinta la qabsashada gobalka
Maqnaanshaha shabakada shabakada caalamiga ah ee farsamada, si aad uhoreenta uhadal ah oo aad u aragto in aad ka warqabto. Por ejemplo, uno puede jaangooyo shakhsi shakhsi shakhsi Shiinaha, ka dib markii aan soo booqday si aad u soo booqato si aad u hesho IP, si aad u hesho jaantuska si aad u hesho. Dhamaan robots iyo rikoodhadhada Google ee loo yaqaan 'IP' si loo yareeyo khadka telefoonka. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah, inkasta oo ay jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin ficilada
4. Wareegyada maamulayaasha ee badanaa
Google si toos ah u soo dir lifaaqa bogga. Si aad isaga ilaaliso shabakada internetka, waxaad u baahan tahay inaad kala tashato. Wixii macluumaad ah, si aad u aragto Google aan lahayn juzgar ka mid ah suuqyada iyo rukuno de palabras xagasha.
Muchas empresas se están conectando en línea. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan farsamoyaqaannada iyo farsamada gacanta. Maqaalkani waa mid ka mid ah macaamiisha, oo muhiim ah in aad ka faa'iidaysato SEO iyo in aad ka mid ah SEO. Adiga oo ogaanaya, adigoo isticmaalaya fariin qoraal ah oo aad u badan oo ku saabsan websaydhka, adigoo adeegsanaayo SEO,. Halkaan waxaad ka heli kartaa, adigoo ku kala duwanaayo qaabab kala duwan oo ku saabsan habka aad u maamuli karto. Fariin ku saabsan barta internetka ayaa ah mid aad u xiiso badan oo ku saabsan barnaamijyada aad u baahan tahay Source .